အစွမ်းသတ္တိ Indicator bounce 2.0 တန်ဂိုလိုင်းနှင့်အတူ - MT4 အညွှန်းကိန်းများ
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်းများ အစွမ်းသတ္တိ Indicator bounce 2.0 တန်ဂိုလိုင်းနှင့်အတူ
ဒီအညွှန်ပြချက်တုံအစွမ်းသတ္တိကိုပြသ, ဘယ်အချိန်မဆိုဘောင်အတွက် breakout သို့မဟုတ် retracement ရာထူးများအတွက်မရှိမဖြစ်.
ငါတိုင်းတာရန်တိုင်းတာမှုအဖြစ်အကွာအဝေးရဲ့ width ကိုသုံး (တစ်ဦးဂန္လှိုနဲ့တူ). ဒီဗားရှင်းအကွာအဝေးရဲ့ width ကိုမသုံးပါဘူး. ဒါဟာအစားဗဟို line ကနေသွေဖည်ကိုအသုံးပြုသည်. နှင့်ဗဟိုမျဉ်းတန်ဂိုလိုင်း၏ရွေ့လျားပျှမ်းမျှဖြစ်ပါသည်.
နှစ်ဆအချိုး = 0;
//— ဘား Spread
နှစ်ဆ SP =(မြင့်သော[ဋ]-အနိမ့်[ဋ]);
//— DownBar မဟုတ်
လျှင်(!(ပိတ်[ဋ-1]-SP * 0.2>ပိတ်[ဋ]))
အချိုး = -1 *(အနိမ့်[ဋ]/TangoMaBuffer[ဋ])+2;
sumpos + =(ပိတ်[ဋ]-အနိမ့်[ဋ])*အချိုးအစား;
//— UpBar မဟုတ်
လျှင်(!(ပိတ်[ဋ-1]+SP * 0.2<ပိတ်[ဋ]))
အချိုး = -1 *(မြင့်သော[ဋ]/TangoMaBuffer[ဋ])+2;
sumneg + =(မြင့်သော[ဋ]-ပိတ်[ဋ])*အချိုးအစား;
Plus အား Histogram - တက်မကြုံဘူးထံမှတုံအစွမ်းသတ္တိကိုပြသ.
အနုတ် Histogram - ချစံချိန်တင်မြင့်တက်ထံမှတုံအစွမ်းသတ္တိကိုပြသ.
signal လိုင်းကို - ပေါင်း / အနုတ်အကြားခြားနားချက် [ (ပေါင်း – အနှုတ်) * ABS((ပေါင်းအနုတ်လက္ခဏာ) / (ပေါင်း + အနုတ်)) ].
အပြာရောင်သေတ္တာ - uptrend တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ (Signal လိုင်း၏ပျှမ်းမျှ).
အနီရောင်သေတ္တာ - downtrend တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ (Signal လိုင်း၏ပျှမ်းမျှ).
အနှေးလိုင်း - Signal လိုင်း၏ပျှမ်းမျှ (ရှည်လျားသော span).
ဇယားပြတင်းပေါက်တန်ဂိုလိုင်းဖြစ်ပါသည် (ဗားရှင်း 1.1).
//— input ကို parameters တွေကို
input ကို int InpRangePeriod = 20; // Range Period
input ကို int InpSlowing = 3; // နှေးသော
input ကို int InpAvgPeriod = 14; // Avg Period
input ကို bool InpUsingVolumeWeight = ဟုတ်မှန်သော; // TickVolume အသုံးပြုခြင်း
input ကိုနှစ်ဆ InpReversalNoiseFilter = 5; // Noise Filter
input color InpSigColor=DarkSlateBlue; // signal အရောင်
input color InpSlowColor=Navy; // အနှေးအရောင်
အစွမ်းသတ္တိ Indicator bounce 2.0 တန်ဂိုလိုင်းတစ် Metatrader ဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူ4(MT4) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
အစွမ်းသတ္တိ Indicator bounce 2.0 တန်ဂိုလိုင်းသာမန်မျက်စိမှမမြင်ရတဲ့သောစျေးနှုန်းဒိုင်းနမစ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောပိုင်ထိုက်သောနှင့်ပုံစံများကို detect လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့နှင့်အတူ.
ဘောင်းခွန်အား Indicator ကို install လုပ်နည်း 2.0 တန်ဂို Line.mq4 နှင့်အတူ?
ဘောင်းခွန်အား Indicator Download 2.0 တန်ဂို Line.mq4 နှင့်အတူ
Copy ကူးဘောင်းခွန်အား Indicator 2.0 သင့်ရဲ့ Metatrader Directory ကိုမှတန်ဂို Line.mq4 နှင့်အတူ / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
ဘောင်းခွန်အား Indicator ပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပြီး 2.0 တန်ဂို Line.mq4 နှင့်အတူ
indicator ဘောင်းခွန်အား indicator 2.0 တန်ဂို Line.mq4 နှင့်သင်၏ဇယားအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်
ဘောင်းခွန်အား Indicator ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို 2.0 သင့်ရဲ့ Metatrader ကနေတန်ဂို Line.mq4 နှင့်အတူ4ဇယား?
Next ကိုဆောင်းပါးသာလျှင် Stochastic